महिनावारी भएको कति दिनमा सम्पर्क गर्दा गर्भ रहन्छ ? जानी राखौँ – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: मंगलबार, साउन २६, २०७८ समय: १०:३७:०४
काठमाडौँ- महिनावारी भएको कति दिनमा से;क्स गर्दा गर्भ रहन्छ ? वा कुन कुन सुरक्षित दिन हो ? भन्ने विषय एकीन गर्न गाह्रो छ । किन की महिलाको महिनावारी चक्र कति दिनको छ, यसले निर्धारण गर्छ ।नियमित महिनावारी हुने र नहुनेमा यसले फरक अर्थ राख्छ ।सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा गर्भधारण हुन मुख्य रुपमा यौ;न स;म्पर्क, वी;र्य स्ख;लन, डिम्ब निषेचन र डि;म्बरोपण जस्ता कुरा हुनु आवश्यक छ ।
महिलाको डि;म्ब महिनाको एकपटक मात्र निष्कासन हुन्छ । डि;म्ब नि;ष्कासन हुने समय नजिक गर्भ रहने सम्भावना बढी हुन्छ । शु;क्रकीटसँग मिलन हुन डि;म्ब निस्किएको हुनु आवश्यक छ ।डि;म्ब निस्किएको यस्तै १४ दिनमा महिनावारी सुरु हुन्छ । यस्तै २८ दिनको महिनावारी भएको महिलाको १४औं दिनतिर डि;म्ब निस्कने भएकाले त्यतिबेला यौ;न स;म्पर्क गर्दा गर्भ रहने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ।